ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): January 2009
Different Aspects Of Loving-Kindness (Metta) (13) မေတ္တာနှင့် စပ်သမျှ အပိုင်း (၁၃)
To Download Dhamma Audio (1)
To Download Dhamma Audio (2)
About Ven. Pannyavaro
If you would like to develop your meditation practice further with this teacher, please free to contact Buddha Dharma Education at the contact information below. In this way you'll received information on meditation classes, workshops and longer retreats.
Posted by The Bliss Of Emancipation at 2:01 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Talks (Audio), Metta, Venerable Pannyavaro
Posted by The Bliss Of Emancipation at 12:13 AM 1 comments Links to this post
Edited By Venerable S. Dhammika
To Download Dhamma Book
Posted by The Bliss Of Emancipation at 4:28 AM0comments Links to this post
သြ၀ါဒ အမှတ် (၁)
ခနိုးခနဲ့ ၊ ဆိုကဲ့ရဲ့ လည်း
သြ၀ါဒ အမှတ် (၂)
သြ၀ါဒ အမှတ် (၃)
တံမြက်လှည်းက၊ စိတ်ကြည်ရ၊ နှစ်ဝသူရောကိုယ်ပါတည်း။
ဉာဏ်ဓာတ်ပွင့်လင်း၊ တံမြက်ရှင်း၊ လက်ငင်းရသော အကျိုးတည်း။
သန့် ရှင်းတတ်က၊ ကျန်းမာကြ၊ မုချရသော အကျိုးတည်း။
သန့် ရှင်းကလျှင်၊ နတ်လူပင်၊ လန်းရွှင်ဝမ်းသာဖြစ်သတည်း။
ဆူးငြောင့်ခလုတ်၊ ပယ်ရှင်းနုတ်၊ ကင်းပြုတ်ဘေးဒဏ် ရန်ပေါင်းတည်း။
အရှုပ်မြက်မှိုက်၊ သုတ်သင်လိုက်၊ ဖြစ်ထိုက် နတ်လူ လှချောတည်း။
လှချော လူနတ်၊ ဖြစ်တုံလတ်၊ ဉာဏ်ဓာတ် သူ့ ထက် ထွန်းလိမ့်တည်း။
နောက်ဆုံးကာလ၊ နိဗ္ဗာန်ရ၊ ဒုက္ခခပ်သိမ်း ကင်းလိမ့်တည်း။
ဗုဒ္ဓမိန့် ဟ၊ ကျမ်းဂန်မှ၊ ထုတ်ပြ ရှင်လူ ကောင်းကျိုးတည်း။
သြ၀ါဒ အမှတ် (၄)
အေး၊ ချို၊ ဆိမ့်၊ ဖန် စားသုံးပြန်
ချဉ်၊ ငန်၊ စပ်၊ ခါး စားသုံးငြား
(မြတ်မင်္ဂလာ ၁၊ ၂၀၀၉ စာစောင်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:00 AM 1 comments Links to this post
Labels: Dhamma Notes, Dhamma Poems, Shwe Hin Thar Sayardaw
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:15 AM0comments Links to this post
တံတားဦးမြို့ နယ်၊ သူငယ်တော်ရွာ
အောက်တန်း ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ အလယ်တန်း ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ အထက်တန်း ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ သုံးမျိုးရှိတယ်။
ကံနဲ့ ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်တဲ့အဆင့်ဟာ အောက်တန်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်။
အနိစ္စ-မမြဲဘူး၊ ဒုက္ခ-ဆင်းရဲတယ်၊ အနတ္တ-အစိုးမရဘူးလို့လက္ခဏာရေးသုံးပါးကို ဆင်ခြင်ပြီးတော့ ဉာဏ်ထဲမှာ ဆင်ခြင်တဲ့သဘောကတော့ အလယ်တန်းဗုဒ္ဓဘာသာ၊
မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်ရပြီး သစ္စာလေးပါးကို မြင်သွားတဲ့အဆင့်ကတော့ အထက်တန်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်။
အောက်တန်း၊ အလယ်တန်း အဆင့်မျှနဲ့ ပဲ အားရတင်းတိမ်မနေကြဘဲ အထက်တန်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေဖြစ်အောင် ယောဂီသူတော်စင်တွေအားလုံး ကျင့်ကြံအားထုတ်ကြရမယ်။
(နေ့ စဉ်ဟောပြသြ၀ါဒ စာအုပ်မှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြပါသည်။)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 4:02 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Articles, Thu Nge Taw Sayardaw
၁။ သိသမျှနာမ် ဖောက်ပြန်တာရုပ် ငါမဟုတ် နာမ်-ရုပ်အစုပါတကား။
၂။ ရုပ်နာမ်နှစ်ဖြာ ဤခန္ဓာ တဏှာကံစသည်တို့ ကြောင့် ဖြစ်ကုန်ပါတကား။
၃။ ဖြစ်ပြီးပျက်ပြန် ဤရုပ်နာမ် အမှန်အနိစ္စတို့ ပါတကား။
၄။ မပြတ်ဖြစ်ပျက် နှိပ်စက်ဖန်ဖန် ဤရုပ်နာမ် အမှန်ဒုက္ခတို့ ပါတကား။
၅။ တိတ္ထိကြံဆ အတ္တမပါ လိုရာအကြိုက် မလိုက်တတ်ပြန် ဤရုပ်နာမ် အမှန်အနတ္တတို့ ပါတကား။
၆။ လောလောပူပြင်း သံအိုးကင်း၌ ထည့်သွင်းနှမ်းတု ဖျစ်ဖျစ်ပြုသို့ငါဟုပညတ် ရုပ်နာမ်ဓာတ်တို့ ဆတ်ဆတ်မုချ ပျက်ကုန်ကြသည် အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ တို့ ပါတကား။
၇။ မတည်မရပ် ရှေ့ နောက်စပ်၍ မပြတ်ဖြစ်ချုပ် နာမ်နှင့်ရုပ် အဟုတ် အသစ်အသစ်တို့ ပါတကား။
၈။ နေရောင်ခြည်ကြောက် ဆီးနှင်းပေါက်တို့ခန်းခြောက်အလား ရုပ်နာမ်များသည် ပျက်ပြားမြန်လှချေတကား။
၉။ ရေပြင်အထက် ဥဖောင်းတတ်သည့် ရေပွက်အလား ရုပ်နာမ်များသည် ပျက်ပြားမြန်လှချေတကား။
၁၀။ ရေပြင်ဖွေးဖွေး ဒုတ်ဖြင့်ရေးသည့် ရေးရေးအလား ရုပ်နာမ်များသည် ပျက်ပြားမြန်လှချေတကား။
၁၁။ ပွတ်ဆောက်ဖျားလျှင် မုံညင်းတင်က လိမ့်စဉ်အလား ရုပ်နာမ်များသည် ပျက်ပြားမြန်လှချေတကား။
၁၂။ ကောင်းကင်ထိပ်ခေါင် မိုဃ်းတိမ်တောင်မှ လျှပ်အရောင်အလား ရုပ်နာမ်များသည် ပျက်ပြားမြန်လှချေတကား။
၁၃။ အာရုံ အာရမ္မဏိက ဓမ္မအားလုံး ကုန်ဆုံးပျက်ဆီး လောကကြီးသည် အချည်းအနှီးသော သဘောတရားတို့ ပါတကား။
၁၄။ လွန်လေနာမ်ရုပ် ကုန်ချုပ်ခဲ့ပြီ ခုလည်းတဖန် ရုပ်နှင့်နာမ်တို့အမှန်ချုပ်ဆဲ နောင်လဲမသွေ ရုပ်နာမ်တွေကို ပျက်ကြေကုန်ှဆုံး ချုပ်လိမ့်အုံးမည် ရွှင်ပြုံးမရှိ ကြောက်ဖွယ်ဘိပါတကား။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 3:34 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 4:12 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 2:23 AM 1 comments Links to this post
The Highest Noble Properties Of Three Gems - Part5(ရတနာသုံးပါး ဂုဏ်တော်များ-အပိုင်း ၅)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 5:47 AM0comments Links to this post
Different Aspects Of Loving-Kindness (Metta) (11) မေတ္တာနှင့် စပ်သမျှ အပိုင်း (၁၁)
Gists From Metta Sutta
Click To Download Dhamma Tape
The Highest Noble Properties Of Three Gems - Part4(ရတနာသုံးပါး ဂုဏ်တော်များ-အပိုင်း ၄)
The Highest Noble Properties Of Three Gems - Part3(ရတနာသုံးပါး ဂုဏ်တော်များ-အပိုင်း ၃)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 7:21 AM0comments Links to this post
The Highest Noble Properties Of Three Gems - Part2(ရတနာသုံးပါး ဂုဏ်တော်များ-အပိုင်း ၂)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 12:37 AM0comments Links to this post
The Highest Noble Properties Of Three Gems - Part 1 (ရတနာသုံးပါး ဂုဏ်တော်များ-အပိုင်း ၁)
ကျေးဇူးတော်ရှင် မူလကသစ်ဝိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ရေးသားစီရင်တော်မူခဲ့သော
Posted by The Bliss Of Emancipation at 11:16 AM0comments Links to this post
Different Aspects Of Maha Pahtana (8) ပဌာန်းတရားတော်နှင့်စပ်သမျှ အပိုင်း(၈)
Explanation Of Maha Pahtana
U Sumingala (Migadawun)
ဥူးသုမင်္ဂလ ဟောကြားတော်မူသည့် ပဌာန်းဒေသနာတော်မြတ်ကြီး
These tapes are downloaded and shared from MMA, "http://mp3.mmblogs.net".
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:55 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Talks (Audio), Maha Pahtana, U Sumingala
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:11 AM2comments Links to this post
Different Aspects Of Loving-Kindness (Metta) (8) မေတ္တာနှင့် စပ်သမျှ အပိုင်း (၈)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:53 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Ebooks, Metta, Venerable Sujiva
Different Aspects Of Loving-Kindness (Metta) (7) မေတ္တာနှင့် စပ်သမျှ အပိုင်း (၇)
The Use And Benefits Of Metta
Venerable Pa-Auk Sayardawgyi
To Watch Dhamma Talk
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:36 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Talks (Video), Metta, Pa-Auk Sayardaw